यी महिलाले बच्चालाइ जन्म दिएपछि, पेटबाट निस्केको अर्को चिजले डाक्टर अ *चम्म परे ! देश भरिनै भयो खैलाबैला – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /रोचक/यी महिलाले बच्चालाइ जन्म दिएपछि, पेटबाट निस्केको अर्को चिजले डाक्टर अ *चम्म परे ! देश भरिनै भयो खैलाबैला
एउटा अचम्मको घ’टना सार्वजनिक भएको छ । यहाँ एक गर्भवती महिलाले बच्चालाई जन्म दिइन् तर जब महिलाले बच्चा जन्माइन् तब डाक्टरको होस् उड्यो । महिलाको पेटबाट बच्चासहित ब’न्दुकको गो’ली पनि निस्कियो । वास्तवमा हाजिपुरको सुल्तानपुरमा बस्ने रुपाले मंगलबार बेलुकी परिवारका सदस्यलाई पेट दु’खेको बताइन् । जब उनीहरुले हेरे तब रुपाको पेट नजिकै एउटा घा’उ देखियो । परिवारले त्यसलाई साधारण घा’उ होला भनेर अस्पतालमा सुत्केरी गराउन भर्ना गरे ।
‘परिवारले यसलाई प्रसव पी’डा ठान्नुभयो र अस्पताल भर्ना गर्नुभयो ।’यहाँ भाग्य नै भन्नुपर्छ कि गो’लीले न त बच्चालाई केही हानी पुर्यायो न नै रुपालाई केही भयो । डाक्टरले पेटमा गो’ली लागेको बताए । पेटभित्र छिरेको गो’लीले कुनै पनि आन्तरिक अं’गलाई क्ष’ती भएन ।नगर थाना हाजीपुरका एसआई परशुराम सिंहले महिलाको पेटमा गो’ली लागेको खबर पाएपछि पुलिस अस्पताल पुग्यो । आखिर गो’ली कसरी चल्यो र कसले च’लायो भनेर अ’नुसन्धान भइरहेको पुलिसले जानकारी दिएको छ । एजेन्सी
जाइफलले गर्छ महिनावारी गडबडी र हाडजोर्नी सम्बन्धी हरेक समस्याको समाधान
कमाइ भन्दा बढी खर्च भएर निराश हुनुहुन्छ ? अपनाउनुहोस् यी तरिका